Soo dejisan TeraCopy 3.2.6 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: TeraCopy
TeraCopy – software ah in aad nuqulka iyo guuraan files ee xawaaraha ugu badan. software waa ay awoodaan in ay dardar-socodka ah ee koobiyeynta adigoo isticmaalaya kayd dheeraad ah iyo geynta multithread. TeraCopy awood si ay u joojiyaan iyo soo celin koobiyeynta ee macluumaadka, ku celi isku day in ay rikoor marka ogaadaa khaladaadka iyo boodi processing ee files shaqsi. TeraCopy ayaa liiska nuqul falgal la files guulaysan guuriyeen, taas oo muujinaysaa by icon u dhiganta inay si dhakhso ah loo ogaado iyo hagaajin dhibaatada. TeraCopy midaynaysa galay macnaha menu sahamisa oo badalay wadahadalka nuqul caadiga ah.
koobiyeynta Fast iyo dhaqaaqin of files
Management of hababka koobiyeynta iyo dhaqaaqin ah
Correction qaladaad inta lagu guda jiro koobiyeynta ah
Isku dhex leh macnaha guud menu sahaminta
Soo dejisan TeraCopy
Faallo ku saabsan TeraCopy
TeraCopy Xirfadaha la xiriira